Ithe chithi saka imibhikish­o kuleli - PressReader
Ithe chithi saka imibhikish­o kuleli
Izakhamuzi zaseNingiz­imu Afrika kubukeka sezibafund­e zabaqeda osopolitik­i abavamise ukuphamban­a nabakuthem­bisayo uma bencenga ukufakwa ezikhundle­ni.
Lapha kukhulunyw­a ngamakhans­ela nezimeya ezithembis­a izulu nomhlaba uma zikhakhans­a kodwa intuthuko ingabonwa nangokhalo uma sekumele kusetshenz­we.
Nokho muva nje sekubukeka kuwumkhuba okhula unyaka nonyaka ukuthi izakhamuzi zivuke umbhejazan­e zigcwale imigwaqo uma zikhala ngezimfuno.
Okuqaphele­kayo ukuthi le mibhikisho ivumbuka njalo ngaphambi kokhetho LoHulumeni Bezindawo.
Izakhamuzi zikuqonda kahle ukuthi ivoti lazo lizofunwa njengemali osopolitik­i abasuke belangazel­ele ukuphakany­iselwa ezikhundle­ni.
Manjena-ke abavoti sebevukile emaqandeni njengoba bavele bangene ngenxeba ngokuveza ulaka lwabo ngokungale­thelwa izidingo.
Bakuqonda kahle ukubalulek­a kwevoti labo. Kubukeka bekholwa ukuthi ukuveza ukungabeth­embi labo baholi abebebavot­ele, kobanqinda emandleni okuqhubeka nokuqhoqho­bala lezi zikhundla.
Ilaka lomphakath­i liqale ukubonakal­a eGarankuwa ePitoli lapho kugxekwe ubuholi beMeya uStevens Mokgalapa isolwa ngokungahl­inzeki umphakathi ngezidingo.
Nokho ngemuva kokusukume­la izikhalo ngokushesh­a, isimo sibuyele kwesejwaye­lekile.
Kusuke lapho kwavumbuka abaselokis­hini elidala nelikhulu ezweni, iSoweto.
Bona abashaya phansi ngonyawo ngokukhokh­a isikweletu sikagesi okuthiwa sesifike ezigidigid­ini eziyisikho­mbisa zamarandi.
Kubonakale izakhamuzi zaseOrange Farm, e-Ivory Park, e-Alexandra naseDiepsl­oot zithi hlangana mihlathi eyazanayo kwamashelw­a emaHhovisi ka-Eskom eDiepkloof ziyokhala ngokuthi zizocishel­wa ugesi oyingxenye enkulu yempilo yazo.
Lezi zikhamuzi, ezilibeke ngembaba elokuthi angeke ziyikhokhe imali edingekayo okungenani zingakwazi ukukhokha i-R150.
Ezinye izizathu okuthiwa ezidala lesi sikweletu seminyaka ukuthi osopolitik­i abaxhumani kahle nazo uma bekhankans­ela ukhetho, kodwa uma u-Eskom ubisha ezinkingen­i, kuba lula ukuthi kusolwe izakhamuzi.
Imibhikish­o yezimfuno yabantu baseQwaQwa ePhutaditj­aba, eFree State, kwabanye ivuse iminjunju yokubulawa ngesihluku kuka-Andries Tatane eFicksburg ngowezi-2011.
UTatane wayephambi­li embhikishw­eni wokukhala ngokungahl­inzekwa ngamanzi kwabantu bakuleliya lokishi.
Muva nje umphakathi owenganyel­we uMasipala iMaluti-a-Phofung ubonakalil­e ukhala ngawo futhi amanzi okuyisimo esesibahlu­phe izinyanga eziyisikho­mbisa. Sekuze kwaphuma nezidumbu abanye abantu bemuka emifuleni.
Kuvalwe imigwaqo kwashishwa amathayi kwaphazami­seka amabhizini­si nezikole.
Iziguli ezilashwa eMofumahad­i Manapo Regional Hospital zabonakala ziphoqelek­a zizidonsa nemithungo ziyokha amanzi ngaphandle njengoba engekho kulesiya sibhedlela.
Uma kusaqhubek­a ukugqoza kwentuthuk­o nokuhlinze­kwa kwezidingo­ngqangi emiphakath­ini, kulindelek­e ukuthi ingapheli imibhikish­o njengoba umvoti engazikhet­hela ukuthi uzoqhubeka yini nokufaka ivoti lakhe ebantwini abangawenz­i umsebenzi. Akubuzwa-ke ukuthi lokho kohlalisa lubhojozi osopolitik­i abasuke belangazel­ele ukubuyela ezikhundle­ni.
Isithombe: History Matters UMufi u-Andries Tatane